ဆိုက်ပရက်နှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
အကောင်းဆုံး ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုယ်စားလှယ် နှင့်ရှေ့နေများ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအစီအစဉ်သည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
နိုင်ငံသား၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံသား၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်နေထိုင်ခွင့်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ , ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်အမြဲတမ်းနိုင်ငံသား, ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ယာယီနိုင်ငံသား, ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား, ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားဖြင့်နိုင်ငံသား, ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နေထိုင်မှု, ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နေထိုင်မှု, ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု, ဒုတိယ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိစီးပွားရေးနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များ၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဒုတိယဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များ။ ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်, Cypr အတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ ငါတို့ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒုတိယအစီအစဉ်၊ ဆိုက်ပရပ်စ်၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ရွှေဗီဇာ၊ ဆိုက်ပရပ်တွင်ရွှေဗီဇာ၊ ဆိုက်ပရပ်တွင်ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဆိုက်ပရပ်တွင်ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ဒုတိယဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ဒုတိယရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ နေထိုင်မှုနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ရွှေဗီဇာ၊ ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိရွှေဗီဇာနိုင်ငံသား၊ ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်။
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်“ ၁ ချက်ဖြေရှင်းချက်” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်အတွက်ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု: ယူရို ၂.၁၅ သန်း
မြေထဲပင်လယ်၏ရတနာ၊ သို့မဟုတ်ဆိုက်ပရက်သမ္မတနိုင်ငံသည်တူရကီတောင်ဘက်နှင့်ဂရိအရှေ့တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီးကျွန်းငယ်တစ်ကျွန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သာဒင်နီယာနှင့်စစ္စလီကျွန်းတို့နောက်တွင်မြေထဲပင်လယ်အတွင်းတတိယအကြီးဆုံးကျွန်းဖြစ်ပြီးလူ ဦး ရေကိုဒေသတစ်ခုအနေနှင့်တွေ့ရသည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်သည်ဥရောပ၊ အာရှနှင့်အာဖရိကမြေ ၃ ခုပေါင်းစည်းရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတည်ရှိသည်။ ၁၉၆၀ တွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုရယူခဲ့သောယခင်ဗြိတိသျှကိုလိုနီသည်ယခုအချိန်တွင်လူသိများသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်းသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိလူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အတူယခင်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုအဖြစ်တိုးပွားလာခဲ့သည်။
ဆိုက်ပရပ်စ်သည်သိသာထင်ရှားသည့်အကွာအဝေးအထိကျယ်ဝန်းသည့်ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ၊ သင်ဖြတ်သန်းသွားသောပျက်စီးခြင်းများ၊ ချိုသောဒိန်ခဲများနှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခိုင်မာဆုံးသောဝိုင်နာမည် (Commandaria) ကိုတည်ရှိသည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်သည်၎င်း၏အရွယ်အစားထက်ကြီးမားသည့်သမိုင်းကြောင်းအတိုင်းအတာရှိသည်။ Paphos တွင်၊ ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုဘီစီလေးရာစုမှရှေးဟောင်းရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာများကဲ့သို့ပင်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုသိမ်းဆည်းထားသည့်ဆိုင်များသို့သွားလိမ့်မည်။ ကျန်ရှိသောရှေးဟောင်းတော်ဝင်နေထိုင်ရာနေရာများ၊ ပို့စ်များနှင့်သင်္ချိုင်းဂူများကဤမြို့အားယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အမွေခံနေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဤကျွန်းကိုပင်ယေဘူယျအားဖြင့်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ရှိပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ၁၀ ​​ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့အတူတကွစုဝေးနှင့်အခြားသို့ပြောင်းရွှေ့, ထင်ရှားတဲ့အစက်အပြောက်ရိုးရှင်းသည်မဟုတ်။ လူတစ် ဦး ချင်းစီသည်နိုင်ငံအကြောင်းများစွာမစဉ်းစားသောကြောင့်၎င်းသည်ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်အထူးသဖြင့်မှန်ကန်သည်။ သို့သော်ကျွန်းရွေးချယ်ထားသူများသည်၎င်းတို့၏နေအိမ်အသစ်နှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရွှင်လန်းဖွယ်ကောင်းပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုရရန်အာမခံသည်။
အကယ်၍ သင်သည်အခြားယခင်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုကိုရှာဖွေနေပါကမြေထဲပင်လယ်၏ရတနာ၌မိသားစုတစ်စုအနေနှင့်အခြေချရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်များရှိနေသည်ကိုအဓိကစိုးရိမ်မှုအဖြစ်ထိန်းသိမ်းထားပါ။ ဆိုက်ပရပ်စ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသည်သင်၏ဘဝကိုတိုးတက်စေနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးအကြောင်းရင်း ၅ ချက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်သာမန်ထက်များပြားသောပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်သူများအတွက်စစ်မှန်သောဆွဲဆောင်မှုမှာအများပြည်သူအာဏာပိုင်များထံမှရရှိသောတွန်းအားများဖြစ်သည်။ အခွန်လျှော့ချခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်များပြားသောခေါင်းစဉ်လုပ်ရပ်များနှင့် EU နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရရှိရန်အခါသမယဖြစ်သည်။
၂၀၀၈ ဘဏ္emergencyာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကာလအတွင်းသူတို့၏ဆိုးဝါးသောပျက်စီးယိုယွင်းမှုနှင့်အတူမြေယာကုန်ကျစရိတ်များပြားလာခြင်းမရှိသေးဘဲအိမ်များပိုများလာသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ညှိနှိုင်းမှုလက္ခဏာများသည်အဓိကအားဖြင့်အစိုးရ၏တွန်းအားကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်အထူးကျွမ်းကျင်သူများသည်ခေါင်းစဉ်လုပ်ရပ်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုသိသိသာသာလျှော့ချပြီးအစီအစဉ်တိုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘဏ္ofာရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး က“ ဒီတွန်းအားဟာမကြာခင်ကာလရှည်ကြာလိမ့်မယ်။ သူကထပ်မံတင်ပြရမည့်အခြားဥပဒအကြောင်းလည်းပြောခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၇၅% အထိအိမ်ခြံမြေခွန်အားလျော့နည်းစေပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်လုံးဝအဆက်မပြတ်ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
ဥပဒေအရဤပြည်နယ်ရှိတစ်နှစ်လျှင် ၁၈၃ ရက်ကျော်ကျော်ဖြတ်သန်းသွားသောမည်သူမဆိုတာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မှီသည်။ ဆိုလိုသည်မှာပြည်တွင်း၌သာမကပြည်ပမှသင်ဝယ်ယူသောမည်သည့်ငွေပေးချေမှုကိုမဆိုသင်ကုန်ကျသင့်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ဒီနေထိုင်ခွင့်နှင့်အတူဗြိတိန်နိုင်ငံသားတွေဟာသူတို့ရဲ့ဗြိတိသျှအရင်းအမြစ်များ၏ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်မြို့တော်အပိုဆောင်းစွဲချက်ပေးဆောင်ဖို့မလိုအပ်; ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏အုပ်ချုပ်ရေး (ယူကေ) အား ၂၀၁၅ increasesပြီလနောက်ပိုင်းမှရရှိသောတိုးမြှင့်မှုအပေါ်လျော်ကြေး (လျော်ကြေးပေးခြင်း) ကိုသာပေးကြသည် (ထိုအချက်သည်ပြည်ပတွင်နေထိုင်သောဗြိတိန်မြေပိုင်ရှင်များအတွက်အခွန်ကောက်ခံမှုစည်းမျဉ်းများကိုပြောင်းလဲသွားသည့်အချက်ဖြစ်သည်)
အပြင်လူများသည်အိမ်တစ်လုံး ၀ ယ်ခြင်းသို့မဟုတ်မြေဝယ်ခြင်းနှင့်ဤနိုင်ငံရှိအိမ်တစ်လုံးကိုပြုလုပ်နိုင်သည်မှာသေချာသည်။ ယူအက်စ်၊ ဗြိတိန်နှင့်မတူကွဲပြားသောနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြေဈေးနှုန်းသည်လွန်စွာပညာရှိသည်။ ကျွန်း၏ဂရိ Cypriot ဘက်ခြမ်းရှိအိမ်တစ်လုံး၏ပုံမှန်ကုန်ကျစရိတ်မှာ US $ 110,000 (£ 88442, € 98206) ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အိမ်နီးချင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘဏ်များသည်အိမ်ခြံမြေ၏ခန့်မှန်းခြေ၏ ၇၀% အထိရှိသည်။
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်အိမ်ခြံမြေ ၀ ယ်ရန်နည်းလမ်းမှာစာလုံးပေါင်းအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုကိုအဖြေရှာရန် ၃ လကျော်ကြာနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့် ၀ န်ကြီးများကောင်စီသို့တင်ပြရန်လိုအပ်သောလျှောက်လွှာတင်ခြင်း၏တိုက်ရိုက်ရလဒ်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ စက်ဝိုင်းသည်အလွန်ရှင်းလင်းပြီးရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်သည်၊ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်စာရွက်စာတမ်းများကိုအထောက်အကူပြုရန်ရပ်ကွက်တစ်ခုတည်ရှိသည်အထိဖြစ်သည်။
ဆိုက်ပရပ်စ်သည်နွေရာသီနှင့်တကယ့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဆောင်းရာသီများနှင့်အတူမြေထဲပင်လယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်သည်။ နိုင်ငံ၏အီကွေတာနှင့်နီးသောပတ်ဝန်းကျင်သည်အပူချိန်နှင့်၎င်း၏ယေဘုယျလေထုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ကျွန်းသူကျွန်းသားများသည်တစ်နှစ်အတွင်းရက်ပေါင်း ၃၄၀ တောက်ပသောနေ့ခင်းဘက်တွင်တွေ့ကြုံခံစားကြရသည်။
နွေရာသီသည်7ပြီလအစောပိုင်းအထိအောက်တိုဘာလကုန်အထိအနည်းဆုံး ၇ လဆက်သွားသည်။ သာမန်နေ့အချိန်၏အပူချိန်မှာဤလများအတွင်း ၃၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန့်ဖြစ်ပြီး ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောကုန်းတွင်းပိုင်းသို့တက်သည်။ နှောင်းပိုင်းနွေ ဦး ရာသီ၏အပူချိန်များကိုမြောက်အာဖရိကသို့မဟုတ်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ စတင်၍ ပူပြင်းသည့်လေပြင်းများကထပ်မံထောက်ပံ့သည်။ ညနေခင်းအပူချိန်သည်ᵒရိယာပေါ် မူတည်၍ ၁၃ ံစင်တီဂရိတ်မှ ၂၄ ံစင်တီဂရိတ်ကြားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ နွေရာသီသည်ခြောက်သွေ့လွင့်စင်သွားသည်သာမက ထပ်၍ ခြောက်သွေ့နေသည်။ အမှန်မှာ၊ ဇွန်လအစောပိုင်း မှစ၍ စက်တင်ဘာလအထိအမြင့်ဆုံးအဆုံးအထိကောင်းကင်၌တိမ်တိမ်နေသည်ကိုတွေ့ရခဲသည်။
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်နှစ်လယ်ပိုင်းနေရောင်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းနိုင်သည်။ လူအများအပြားတို့သည်ထုပ်များကိုစုပ်ယူကြစဉ်၊ မွန်းလွဲပိုင်းမှည ၃း၃၀ ထိယေဘုယျအားဖြင့်ကြာမြင့်စွာလှုပ်ခတ်သွားသောအခါအ ၀ တ်အထည်များ၊ ဦး ထုပ်များနှင့်အရိပ်ကဲ့သို့သောခုခံကာကွယ်သည့်ပစ္စည်းများကဲ့သို့အစိုင်အခဲနေရောင်ကာကွယ်ခြင်းကိုဝတ်ခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။ ပူပြင်းခြောက်သွေ့မှုမှကင်းဝေးစေရန်နေပူထည်များသည်လည်းအရည်များများသောက်သင့်သည်။
နွေ ဦး ရာသီတွင်ပုံမှန်နေ့ခင်းအပူချိန်အများစုသည် ၂၅ ံစင်တီဂရိတ်အထိကျသွားပြီးတစ်နှစ်အေးသောအချိန်တစ်လျှောက် ၁၆ ᵒစင်တီဂရိတ်အထိကျသွားနိုင်သည်။ ညနေခင်းအပူချိန် ၉ ᵒစင်တီဂရိတ်အထိနိမ့်ကျနိုင်သည်။ ထိုကာလတစ်လျှောက်လုံးတောက်ပသောနေ့ရက်များနှင့်နိုဝင်ဘာလနှင့်မတ်လတို့တွင်မိုးရွာသွန်းမှုများပြားလိမ့်မည်။
သူတို့နိုင်ငံမှာသင်နှင်းလျှောစီးသွားနိုင်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပင်လယ်ထဲမျောပါသွားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုဆိုက်ပရပ်စ်တွေကနှစ်သက်ကြတယ်။ ဇန်န ၀ ါရီမှမတ်လအတွင်းယခင်ကသင်္ဘောသည်နှင်းလျှောစီးရန် Troodos တောင်တန်းများသို့သွားပြီးပင်လယ်ပြင်၌အားအင်ပြည့်ဝစွာရေကူးခဲ့သည်။
ဂရိနှင့်တူရကီတို့အကြားအကြီးအကျယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည့်နောက်ခံအားဖြင့်ဆိုက်ပရပ်စ်သည်ဤကျွန်းနှစ်နိုင်ငံလုံးကိုအာမခံရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သောကြောင့်မှားယွင်းသောရလဒ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသဖြင့်စိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်နေထိုင်ရန်လုံခြုံမှုအရှိဆုံးဥရောပနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ မြေထဲပင်လယ်ကျွန်းပေါ်တွင်ကြာမြင့်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြသောဗြိတိန်နိုင်ငံသားဟောင်းများသည်ဆိုက်ပရပ်စ်၏သာယာဝပြောမှုနှင့်လုံခြုံရေးအဆင့်များသည်ယူကေထက်ပိုမိုမြင့်မားကြောင်းအာမခံသည်။
အသေးအဖွဲဖောက်ထွင်းမှုဥပမာများကို (အထူးသဖြင့်အပန်းဖြေခရီးသွားများနှင့်ဟောင်းနွမ်းသောသူများက) ဆက်တိုက်ယူဆရသော်လည်းဤကျွန်းပေါ်တွင်ရာဇ ၀ တ်မှုနှုန်းမှာနည်းပါးသည်။ စူးစမ်းရှာဖွေသူများသည်ဤနည်းဖြင့်၎င်းတို့၏မှတ်ပုံတင်၊ ငွေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအကာအကွယ်ပေးထားသောနေရာတွင်ထားရန်အားပေးသည်။ စူးစမ်းရှာဖွေသူအမျိုးသမီးများသည်အခြားပြင်ပနိုင်ငံအချို့တွင်သူတို့လုပ်သင့်သောပုံမှန်သတိထားသည့်အဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်သင့်သည်
ဤကျွန်းသည်ကလေးများကိုပြုစုပျိုးထောင်ရန်ထူးခြားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်အတွင်းရှိအထွေထွေရာသီဥတုသည်များသောအားဖြင့်မည်သည့်ဘေးအန္တရာယ်မှမကင်းသောကြောင့်ကလေးများသည်သူတို့၏ရှေးရှေးများကသူတို့ကိုဖိအားမပေးဘဲအပြင်ဘက်တွင်ကစားနိုင်သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့အရွယ်ရောက်သူတွေအနေနဲ့မတော်တဆမှုတွေနဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ကလေးငယ်တွေကိုစောင့်ကြည့်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။
ဆိုက်ပရာမြောက်ပိုင်းနှင့်တောင်ပိုင်းရှိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမူဘောင်သည်ကမ္ဘာ့စံနှုန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအစက်အပြောက်အများစုလိုပဲ, ဟောင်းနွမ်းလူရွှင်တော်အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများအကြားရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံ၏အမျိုးသားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်သည်လူတိုင်းအတွက်အဆင်ပြေစေရန်အခမဲ့ဆေးကုသမှုကိုအခမဲ့ပေးသည်။ အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုနည်းသော Cypriots များသည်ဘာမျှမတတ်နိုင်သောသို့မဟုတ်ငွေကြေးထောက်ပံ့သောဆေးဝါးများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီကြသည်။ အစိုးရအရေးပေါ်ဆေးခန်းများရှိအရေးပေါ်ကုသမှုများကိုပြင်ပမှနိုင်ငံသားများအပါအ ၀ င်လူတိုင်းအားအခမဲ့ပေးသည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာဥပဒေကြမ်းနှင့်မကိုက်ညီသူများအနေဖြင့်ဖြည့်စွက်ကုသမှု၏မျှော်လင့်ချက်နှင့်အတူနားလည်မှုဖြင့်ကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များကိုပေးသင့်သည်။
အဓိကမြို့ပြareasရိယာအားလုံးတွင်အစိုးရကျောထောက်နောက်ခံပေးထားသောဆေးခန်းများရှိပြီး ပို၍ ကျိုးနွံသောသူနာပြုအိမ်များ၊ ဆေးခန်းများနှင့်ဆေးရုံများရှိသည်။ ကြီးမားသောမြို့ပြပုဂ္ဂလိကဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုareaရိယာသည်ပုဂ္ဂလိကကျွမ်းကျင်သူများ၏ကိုယ်ပိုင်အလေ့အကျင့်များကြောင့်အခြေခံအားဖြင့်လွှမ်းမိုးထားသည်။ ယခင်အတွေ့အကြုံများအတွက်အကောင်းဆုံးအပိုင်းမှာလက်တွေ့ကျွမ်းကျင်သူအားလုံးနီးပါးသည်သူတို့၏ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအချို့ကိုရရှိခဲ့ကြပြီးအင်္ဂလိပ်စကားနှင့်ပြောဆိုတတ်ကြသည်။
အချို့သောအစီအမံများနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့် Cypriot ဖက်ဒရယ်အငြိမ်းစားအကူအညီမူဘောင်တွင်ထည့်သွင်းမထည့်သည်ဖြစ်စေ၊ ဒီအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာဖို့ဒီနေရာကို Snap ။
ကျွန်းပေါ်တွင်ကပ်ရောဂါနှင့်မတွန်းလှန်နိုင်သောကူးစက်မှုနှုန်းသည်ကြာမြင့်စွာကတည်းကယုံကြည်စိတ်ချရမှုနည်းပါးသည်။ တိုင်းပြည်အတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်လာသူများသည်မည်သည့်ကာကွယ်ဆေးမျှမလိုအပ်ပါ။
ယူရို ၂.၁၅ သန်း
အတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများ အတွက်ရွှေဗီဇာ ဆိုက်ပရပ်စ်
အစီအစဉ်ပေါ် မူတည်၍ သဘာဝလက်မှတ် (နိုင်ငံသား) သို့မဟုတ်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးခွင့်ပြုချက်ကို ၆ လရှိရမည်၊ ယူရို ၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ပိုင်ဆိုင်သည့်နေထိုင်ခွင့်ရှိသည်
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်7နှစ်တရားဝင်နေထိုင်မှု
အိမ်ခြံမြေ / စီးပွားရေး
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကြီးစွာသောပထဝီအနေအထားရှိသည်။ ၎င်းသည်ဥရောပသမဂ္ဂရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအစီအစဉ်များရှိသည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးနောက်နိုင်ငံပေါင်း ၁၅၀ သို့ဗီဇာမရှိဘဲအလွယ်တကူသွားနိုင်သည်။ သင်သည်မည်သည့်အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်မဆိုနေထိုင်ရန်၊ ခရီးသွားရန်နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်သည်သင့်အားအလွန်လုံခြုံသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုပေးသည်။ ပထမတန်းစားဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာများစွာတည်ရှိသည်။ အခြားနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တိုင်းပြည်တွင်အခွန်နှုန်းနိမ့်ကျသည်။ ထို့အပြင်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကြီးစွာသောပညာရေးစနစ်ရှိသည်။ တိုင်းပြည်သည်မည်သည့်ဘာသာစကားသို့မဟုတ်အိမ်ခြံမြေလိုအပ်ချက်မလိုအပ်ပါ။
ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်အသက် ၁၈ နှစ်အောက်ကလေးများဖြစ်နိုင်သောမိသားစု ၀ င်များ၊ သို့မဟုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူအပေါ်မှီခိုနေသော ၁၈ နှစ်အောက်ကလေးများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်ပါသည်။ လျှောက်လွှာတွင်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုထည့်သွင်းရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။
လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြန်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၃ လအထိကြာနိုင်တယ် ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံသားခံယူခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်သင်သည်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ရောက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ၇ နှစ်တစ်ကြိမ်ဆိုက်ပရပ်စ်ကိုသာသွားဖို့လိုသည်။ သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးနောက်ဆိုက်ပရပ်စ်ကသင့်ကိုပေးနိုင်သည့်အကျိုးကျေးဇူးအားလုံးကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ရွှေဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုရရှိရန်အတွက်သင်သည်အနည်းဆုံးနိုင်ငံသား ၅ ဦး အလုပ်ခန့်ထားသင့်သည့်ဆိုက်ပရပ်စ်၏ဘဏ္assetsာရေးဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်သောအိမ်ခြံမြေစျေးကွက်သို့ယူရို ၂ သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုအပ်သည်။ သင်သည်ဤအရာအားလုံးကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို (၃) နှစ်ထားသင့်သည်။
ထို့အပြင်အနည်းဆုံးယူရို ၅၀၀,၀၀၀ ကုန်ကျမည့်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်အိမ်ခြံမြေဝယ်ရန်သင်တာဝန်ရှိသည်။ ဒီပစ္စည်းဥစ္စာကိုတစ်သက်တာလုံးထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုလိမ့်မယ်။ သင်အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်လိုပါကထိုအိမ်၏စျေးနှုန်းသည်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်ချက်၏အနည်းဆုံးယူရို ၂ သန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ လျှောက်လွှာတွင်သင်သို့မဟုတ်သင့်အိမ်ထောင်ဖက်၏မိဘအမည်များပါရှိပါကအနည်းဆုံးယူရို ၅၀၀,၀၀၀ တန်ဖိုးရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလည်းမိဘများက ၀ ယ်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့မဟုတ်စုံတွဲများသည်အနည်းဆုံးယူရို ၁၀၀၀,၀၀၀ တန်ဖိုးရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုကိုအတူတကွဝယ်ယူနိုင်သည်။
လျှောက်လွှာအတွက်အစိုးရ၏အခကြေးငွေမှာအရွယ်ရောက်သူတိုင်းအတွက်ယူရို ၇၀၀၀ ဖြစ်သည်။ အကြံပေးကြေးသည်မိသားစု၏အသက်နှင့်အရေအတွက်အပေါ် အခြေခံ၍ ပြောင်းလဲမှုဘာသာရပ်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နိုင်ငံသားအဖြစ် ဆိုက်ပရပ်စ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ ဆိုက်ပရပ်စ်ဘို့ ဖောက်သည်များနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိသူတို့၏မိသားစုများကိုဆိုက်ပရက်စ်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအထောက်အပံ့၊ ဆိုက်ပရပ်စ်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံမှထောက်ပံ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဆိုက်ပရပ်စ်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဆိုက်ပရပ်စ်မှ Golden Visa သို့မဟုတ်ဆိုက်ပရပ်စ်မှသို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မှနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသာကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ ကုပ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လိုပါကအပြည့်အဝဖြေရှင်းနိုင်မည့်ဆိုက်ပရပ်စ်မှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ ငွေရေးကြေးရေးစီမံကိန်းနှင့်အခြားများစွာပါ ၀ င်သောဆိုက်ပရပ်စ်သို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်များစွာရှိသည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ဆောင်မှုများအားဖြင့်နိုင်ငံသား ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်ဆိုက်ပရပ်စ်အဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်တတ်နိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့ရပျ, ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင်နိုင်ငံသား, ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကတတ်နိုင်နိုင်ငံသားနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်တတ်နိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီ
နိုင်ငံသား ၃၃ နိုင်ငံမှဆိုက်ပရပ်စ်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဆိုက်ပရက်စ်ရှိရွှေဗီဇာ။
ဆိုက်ပရပ်စ်မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
ဆိုက်ပရက်မှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်နိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုဆိုက်ပရပ်စ်မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း။
ဆိုက်ပရပ်စ်မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
ဆိုက်ပရပ်စ်မှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအထိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ၀ င်ငွေကောင်းကောင်းရသင့်သည်ဟူသောအမြင်ဖြင့်ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးသည်။ သူတို့သည်ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းဖြင့်သူတို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ပြုလုပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှထွက်ခွာလိုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်အတူအဆင်ပြေချောမွေ့ပြီးကောင်းမွန်သောအမြတ်အစွန်းနှင့်သူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုသည်ဆိုက်ပရပ်စ်ဒေသ၏ကောင်းသောနေရာများတွင်အကောင်းဆုံးအမြတ်အစွန်းများရရှိစေသည်။
သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံသား
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်ဆိုက်ပရပ်စ်သို့ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏အောင်မြင်သောနိုင်ငံသားအတွက်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်မည်သည့်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ ဆိုက်ပရပ်စ်မှသို့မဟုတ်ဆိုက်ပရပ်စ်သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင့်လိုအပ်ချက်ကိုနားလည်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုရယူရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်ဖောက်သည်များအားဆိုက်ပရပ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားပြုခြင်းကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်ကန ဦး လျောက်ပတ်စွာစေ့စေ့စစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်လုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိသောအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များနှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ဆိုက်ပရပ်စ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့မဟုတ်ဆိုက်ပရပ်စ်မှသို့မဟုတ်လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများအားကမ်းလှမ်းခြင်းမပြုပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ဆိုက်ပရပ်စ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ရှိသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုဆိုင်ရာထောက်လှမ်းခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ဆိုက်ပရပ်စ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်တရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် ဆိုက်ပရပ်စ်ဘို့ ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်မျိုးရိုးဗီဇပစ္စည်းအတွက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတစ် ဦး ချင်းစီအဘို့မဟုတ်ပါဘူး။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ဆိုက်ပရပ်စ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ကုန်သွယ်ရေး၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့နှင့်ဆိုင်သောဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်အထောက်အပံ့မရနိုင်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ဆိုက်ပရပ်စ်ဘို့ တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု ဆိုက်ပရပ်စ်ဘို့ ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဆိုက်ပရပ်စ် ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိညစ်ညမ်းစာပေများကိုရောင်းဝယ်သူများကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသား ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရှေ့ရပျ ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းလုပ်ငန်းကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏ KYC အတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုသေချာစေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း၊ ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိအာဏာပိုင်များမှလျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်ငြင်းဆိုမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နိုင်ငံသားအဖြစ် ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ခွင့်ပြုချက်မရပဲနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပံ့ပိုးမှုအတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုတွင်ဆိုက်ပရပ်စ်အပါအ ၀ င်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိပြီးကမ္ဘာတစ်လွှားမှ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကူညီပေးနေသည်
အကယ်၍ ဆိုက်ပရပ်စ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်တွက်မိသားစု ၀ င်များနှင့် ၄ င်းတို့၏အသက်အရွယ်များကိုအသေးစိတ်ဖြည့်ပါ။ ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက် ၀ ယ်ယူသူအမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့်အခြားကုန်ကျစရိတ်များအရနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကုန်ကျငွေပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ ဆိုက်ပရပ်စ်ဘို့
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူဆိုက်ပရပ်စ်သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေနှင့်၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်လိုအပ်နိုင်သည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းအပြင်ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ၎င်းကိုဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများကပေးသောထီးတစ်ချောင်းအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုရှာ။ မရနိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆိုက်ပရပ်နှင့် ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်ဆိုင်ဖွင့်စေသည်။
မိသားစုများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် (သို့) Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (ဆိုက်ပရပ်စ်၌ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )
ဆိုက်ပရပ်စ်သို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချမည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလိုအပ်လိမ့်မည် ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ်အကောင့် ဆိုက်ပရပ်စ်မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီဘဏ်အကောင့်လည်းရှိတယ်၊ ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်တွေလည်းကူညီနိုင်တယ်။
Incase သင်အဘို့, ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် သငျသညျဖို့စီစဉ်ထားလျှင်ဆိုက်ပရပ်စ် ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ရှိပြီးသားစီးပွားရေးကို ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန် ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ချက်ချင်းစတင်ဘို့။
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက် HR န်ဆောင်မှု
ကျွန်တော်တို့၏ ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ ဆိုက်ပရပ်စ်များအတွက် virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက် Virtual ရုံးလိပ်စာ
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း
နိုင်ငံသားအဖြစ်ဆိုက်ပရပ်စ်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်, အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆိုက်ပရပ်စ်.
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် Web ဒီဇိုင်း
ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက် Blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက် App ကိုဖွံ့ဖြိုးရေး
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြေများအားဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်။ ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်လိုင်း၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်နေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုချက်ရှိသည်၊
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ထားပါကဆိုက်ပရပ်စ်၏ပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်သင်၏ရှေ့နေအားတရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်သည့်နိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုအက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်တရား ၀ င်ဆိုက်ပရပ်စ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကတရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
အမေးအဖြေများ - ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်ဆိုက်ပရပ်စ်၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဆိုက်ပရပ်စ်၏နေထိုင်မှုကိုဆိုက်ပရပ်စ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ခွင့်ကဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်း, ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်မှတဆင့်ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်း, ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်မှာအကောင်းဆုံးနေထိုင်မှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများကထောက်ခံ ဆိုက်ပရပ်စ်၌တည်၏။
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်မှု | ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များ၏နေထိုင်မှု | ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကနေထိုင်
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဆိုက်ပရပ်စ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်၏စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများအားဖြင့်ဆိုက်ပရပ်စ်၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတစ်ဆင့်ဆိုက်ပရပ်စ်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်လက်ခံသည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနိုင်ငံသားနှင့်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းသည်ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများဖြစ်သည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များနှင့်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးကုပရု | ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်စျေးပေါလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့ရပျ | ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်စျေးနှုန်းချိုသာတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်စျေးနှုန်းချိုသာတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်စျေးသင့်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်စျေးသက်သာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဆိုက်ပရပ်စ်၏တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်းစသည်ဖြင့်ဆိုက်ပရပ်စ်၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကြံပေးများ၊ ဆိုက်ပရပ်တွင်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံများမှတဆင့်။
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အေးဂျင့် | ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
စီးပွါးရေး၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေစသည်တို့ဖြင့်ဆိုက်ပရပ်စ်၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဆိုက်ပရပ်စ်၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုဆိုက်ပရပ်စ်ရှိရွှေဗီဇာဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဆိုက်ပရပ်ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်ဆိုက်ပရပ်အတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနည်းဆုံးမှာယူရို ၂.၁၅ သန်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံသား၏ကုန်ကျစရိတ်ဆိုက်ပရပ်စ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကုပရုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်များကိုအားဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားတဲ့အသားတင်တန်ဖိုးရှိလူတစ် ဦး ချင်းစီအဘို့ဖြစ်၏, ငါတို့ဆိုက်ပရပ်စ်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသားအဘို့အတိုင်ပင်ဆွေးနွေးအခကြေးငွေသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်အားဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်အခြားထောက်ခံမှုအများကြီးပေး။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအာရှမှဆိုက်ပရပ်စ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နိုင်ငံသား၊ အာဖရိကမှဆိုက်ပရပ်စ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဥရောပမှဆိုက်ပရပ်စ်မှနိုင်ငံသား၊ တောင်အမေရိကမှဆိုက်ပရပ်စ်သို့နိုင်ငံသားပြုခြင်းဥပမာ - နိုင်ငံသားပြုမှုကိုနိုင်ငံမှနိုင်ငံသားများကအသုံးပြုနိုင်သည်။ မလေးရှားမှဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ အင်ဒိုနီးရှားမှဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ နီပေါမှဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ အိန္ဒိယမှဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု ယူအေအီးမှဆိုက်ပရပ်စ်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
link ကိုမှ ဆိုက်ပရပ်စ်၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန , ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရှိန်အဟုန်အဘို့အမူဝါဒများရေးဆွဲတာဝန်ရှိသည်